Yunaaytid Isteets Deebii KOOVIID -19 Hogganuu itti fufteetti
Yunaayitid Isteetis addunyaa irraa COVID-19 ilaalchisuun gargaarsa kennamu hojiin agarsiisuun dursitee itti fufaa jirti jechuu dhaan miinistriin dhimma alaa Antonii Bilinken dubbataniiru.
Meeshaalee talaallii fi lubbuu oolchuuf oolan oomishuu dabaluu, mala talaallii addunyaaf raabsuu kan akka COVAX deggeruuf gumaachinee jirra. Talaallii doosii miliyoona 234 ol biyyoota addunyaa 100 ol ta’an akkasumas dinagdee addunyaaf gumaachinee jirra jedhan.
Tattaaffiiwwan kun tarkaanfilee barbaachisaa yoo ta’an jedhan ministrichi Bilinken, hedduu garuu waan hojjetamutu jira. Kaka’umsa haarawaa sadii illee ennaa wal ga’ii ministerotaa ka dhimma COVID-19 dhiyeenyaa labsanii jiru.
Inni duraa, talaalliin kanneen isaan barbaachisu dhaqqabuu mirkaneeffachuu, wal ta’iinsa waaltaalee dhuunfaa biyyoota galii gad aanaa fi giddu galeessa qaban keessatti tattaaffii hojii loojistikaa deggeruuf tajaajila seeraa ka tolaa kennuu akkasumas, meeshaalee barbaachisu dhiyeessuu fi dandeetti isaanii cimsuu dha. Yunaayitid Isteetis keessa kan maadheffatan kampanilee kan Ameerikaa hin ta’in kan ofitti haammate tattaaffiin kun, dhiyeessii qindeessuu, caasaalee dhiyeessii ta’aallii, caasaalee keellaa talaalliin itti kennamuuf haala mijeessa.
Inni lammataa, hojii hojjetamu keessatti iftoominii fi itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf, ministrichi Beilinken haala COVID-19 irra jiru hordofuuf mala qophaa’e simatanii jiran.
Marsariitiin COVID19GlobalTracker.org irratti kan argamuu fi IMF fi jarmayaa fayyaa addunyaa , baankii addunyaa akkasumas wal ta’iinsa dhibeetti duuluu fi meeshaa dhiyeessuu kan tattaaffii addunyaa ACT jedhuun qophaa’e, namni martinuu ragaa ilaalchisee fooya’ina argamee akka hordofu gochuuf gargaara.
Sadaffaan, haalli isaanii kamiinuu haa ta’u namni martinuu talaallii akka argatu kan taasisuu dha. Mootummaan Yunaayitid Isteetis kampanilee dawaa Johnson & Johnson jedhamuu fi COVAX talaallii Johnson and Johnson jalqabaa namoota naannoo walitti bu’insi keessa jiraataniif gargaarsi namoomaa isaan brbaachisu akka dhaqqabuuf walii galteen akka jiraatu jidduu seenee jira.
Dhuma irrattis, wal ga’iin ministeertotaa dhiyeenya geggeessame irratti, Yunaayitid Isteetis kan invest irratti gooteef deggetu akkasumas barbaachisummaa talaallii bu’a qabeessa addunyaa fi dhiyeessii meeshaa wal’aansa fayyaa babalisuu, misooma bu’a qabeessa sadarkaa addunyaa cimsuu, bulchiinsa isaa fi itti fufsiisuun babaachisaa akka ta’e dubbataniiru,
Yunaayitid Isteetis weerara kana bakka maraa akka dhabamu gochuuf wal ta’iinsaa fi fooya’ina mala haaraa argamsiisuu itti fufti jechuu dhaan gulaalaan har’aa yaada isaa xumura.